Odayaal dhaqameed loo xiray socdaal ay ku tagi rabeen magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Odayaal dhaqameed loo xiray socdaal ay ku tagi rabeen magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud
Wararka naga soo gaaraya gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in ciidanka maamulka Ahlu-sunna Waljameeca ee gobolada dhexe ay xabsiga u taxaabeen ilaa shan Oday dhaqameed oo ka tirsanaa kuwa deegaanka Bali-howd ee hoostagta magaalada Guriceel.
Odayaashaan ayaa sida la sheegay lagu soo eedeeyay inay u socdaali rabeen magaalada Cadaado oo ka tirsan gobolka Galgaduud islamarkaana xarunta KMG ah ee maamulka Galmudug, xilli dhawaantaan uu maamulka Ahlu-sunna kasoo saartay amar ah in dadka ku nool goobaha ay maamusho aysan tagi karin magaalada Cadaado oo xarun KMG u ah maamulka Galmudug.
Ilaa iyo haatan lama oga halka lagu xiray odayaal dhaqameedka deegaanka Bali-howd, iyadoona saraakiisha maamulka Ahlu-sunna aysan weli kama hadlin xariga ay ciidamadooda kula kaceen odayaashaas.
Dhinaca kale, odayaasha la xiray ayaa la sheegay inay magaalada Cadaado ugu socdeen inay maamulka Galmudug kala soo hadlaan xubnaha maamulkaasi u matali doono doorashadda la qorsheeynayo inay dabayaaqadda sanadkaan ka dhacdo Soomaaliya.
Ma jirto wax hadal ay arrinkaan kasoo saareen madaxda maamulka Galmudug, kaas oo ku aadan xariga ay maamulka Ahlu-sunna u geysteen odayaal dhaqameed ka tirsan deegaanka Bali-howd ee gobolka Galgaduud.